China Screw Type Mud Valve ho an'ny orinasa API6A Standard sy mpanamboatra | Cepai
Ny valizy tsotra Mud dia mifanaraka amin'ny API 6A 21th Edition farany, ary mampiasa fitaovana mety amin'ny serivisy H2S araka ny fenitra NACE MR0175.
Kilasy ara-materialy: AA ~ HH
Valve Mud CEPAI, Volavola azo ianteherana amin'ny serivisy mavesatra be amin'ny toe-javatra masiaka ary novolavolaina manokana ho an'ny fitakiana sarotra amin'ny serivisy famokarana solika, ny volavolan-tsika ho an'ny valizy fotaka dia misy tombo-kase malefaka sy vy ho an'ny rafitra tombo-kase vy, familiana visy roa, sokafana haingana sy akaiky, Ny tombo-kase azo antoka dia mahatonga ny androm-piainanao maharitra, ary ny bonnet dia azo esorina mora foana hanamarinana ny trims fa tsy ny fanasarahana ny faritra rehetra amin'ny valva. Fifandraisana CEPAI misy flange, union, visy ary karazana welding.
Haavo famaritana vokatra: PSL1 ~ 4 Kilasy fitaovana: AA ~ HH Fepetra takiana: PR1-PR2 mari-pahaizana momba ny maripana: LU
◆ Tsipika fampifangaroana tosika avo
◆ Valizy misakana ny rafitra fandavahana tosika avo
◆ manifold famokarana • manifold manifold
◆ Rafitra fanangonana famokarana • valves block Manifold
Anarana Valve fotaka
Model Valve Flange Type Mud Valve / Union Type Mud Valve / Welding Type Mud Valve / Screw Type Mud Valve
Pressure 2000PSI ~ 7500PSI
savaivony 2 "~ 5" (46mm ~ 230mm)
Vato fisaka mitsingevana e
Ny vavahady fisarihana misy ifandraisany amin'ny "T" slot dia mamela ny vavahady hitsinkafona amin'ny seza manome tombo-kase hentitra kokoa.
Fahaizana manamboatra saha an-tsaha
Ny bonnet dia esorina mora foana amin'ny fizahana anatiny sy / na fanoloana raha tsy esorina ny valva amin'ny tsipika. Ity famolavolana endrika ity dia mamela ny serivisy haingana sy mora nefa tsy mila fitaovana manokana.
Bearer roller andraikitra mavesatra
Ny bearings lehibe sy mavesatra andraikitra dia mampihena ny tady. Tsy mahazaka, mahatohitra abrasion, endrika seza iray.
Ny fivorian'ny seza dia misy volo vy / fanohanana roa vy izay mifamatotra maharitra ny elastomer mahazaka.
Ny elastomer dia manome fanidiana mikatona rehefa avy nampiasaina ela tamin'ny serivisy fanararaotana. Ny peratra vy tsy misy fangarony dia miady amin'ny harafesina sy tsy mihombo. Ny peratra dia natao manokana mba hiantohana ny tanjaka fatorana farany ambony ho an'ny elastomer. Ny famolavolana tokana dia manamora ny fanoloana ny saha.
Fanidiana ny fampifanarahana seza
Ny fivoriamben'ny seza dia novolavolaina tamin'ny vy «hidin-trano» izay manisy vatofantsika ny seza ao ambanin'ny valizy. Ity famolavolana ity dia miantoka ny fampifanarahana seza marina miaraka amin'ny fanoherana faran'izay kely ny fikorianany.
Peratra fitondra vatana
Ny vatan'ny firaka mihamafy amin'ny vatany dia miverina miverina amin'ny lafiny roa amin'ny seza. Ireo peratra ireo dia manitatra ny androm-piainan'ny valizy amin'ny alàlan'ny fisintomana akanjo manaitaitra izay mety hanimba ny vatana manodidina ny faritry ny seza.
Famolavolana taho miakatra
Ny DM 7500 dia mampiasa volavolan-tsolika miakatra izay mitoka-monina sy miaro ireo kofehy tsy ho mpanelanelana amin'ny tsipika.
Lensa famantarana ny toerana hita maso
Ny mason-tsivana fanondroana toerana mazava dia ahafahan'ny mpandraharaha mamaritra mora foana raha misokatra na mihidy ny valizy. Ny solomaso famantarana dia manampy amin'ny fiarovana ireo kofehy amin'ny fotony koa amin'ny toetr'andro.
Famonosana tsoroka azo soloina
Ny famonosana ny tsorakazo dia azo soloina tsy esorina ny bonnet amin'ny valve (3 "- 6") raha mitaky fotoana ilana izany fikojakojana izany (mariho: ny tsindry amin'ny tsipika sy ny valva dia tsy maintsy esorina alohan'ny hanaovana io fikojakojana io).
Volavola voadio amin'ny onja
Ny faritra misy ny lavaka dia natao hamelana "flushing" mitohy amin'ny fikorianan'ny tsiranoka. Ity hetsika ity dia manakana ny valva tsy hidina "sanding up", eny fa na dia ny fametrahana standpipe aza.
Previous: Valve vavahady ampiasain'ny Hydraulika
Manaraka: Volo roa manamboatra valizy baolina mitsingevana
Valve vavahady fotaka
Mpanamboatra valva vavahady
Manitatra amin'ny alàlan'ny valizy vavahady Conduit ho an'ny API6A ...